Wasiirka Dhallinyarada iyo Isboortiga oo u daawasho tagay kulamo ka tirsan tartanka isdhex galka dhallinyarada + Sawirro | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Wasiirka Dhallinyarada iyo Isboortiga oo u daawasho tagay kulamo ka tirsan tartanka isdhex galka dhallinyarada + Sawirro
Posted by: radio himilo May 23, 2016
Magaaladda Muqdisho waxaa ka soconaya tartanka isdhex galka dhallinyarada oo loo qabtay ardayda wax ka barata Iskuuladda magaaladda Muqdisho.
Tartankan oo ay ka qeyb galayaan in ka badan 15 Iskuul, wuxuu soo bilowday toddobadii bishan May, waxaa soo qaban qaabiyay Guddiga Olombikada Somaaliyeed iyadoo shirkadda SKA ay taabagelineyso tartankan kubadda cagta ah.
Maxamed C.Laahi Xassan Nuux oo ah Wasiirka Dhallinyarada iyo Isboortiga ee xukuumadda Soomaaliya ayaa ka soo qeybgalay afar dhammaadka tartankan oo lagu cayaaray shalayto gegada kubadda cagta ee ku taal Turkey Nile Academy EX Dugsigii hore ee farsamadda.
Wasiirka ayaa bogaadin iyo hanbalyo u jeediyay da’yartan dalka wax ku barata ee bugcadda usoo gashay ka qeyb galka tartankan isdhex galka bulshada looga gol leeyahay, isagoo xusay inay garab taagan yihiin bahda cayaaraha oo ayna hormarin doonaan jiilka soo koraya ee indhaha ku haya inay cayaaraha magac macna ku fadhiya ka sameeyaan.
Previous: Kolo & Yaya, walaalaha Ayew iyo Siddeedda laacib ee ugu caansan xiddigaha wada dhashay ee reer Afrika + Sawirro
Next: Degdeg: Manchester United oo erisay macallin Van Gaal iyo shaqaalihiisa tababarka